Muxuu Mareykanku ka yiri duqeynta gobolka Mudug? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Mareykanku ka yiri duqeynta gobolka Mudug?
Taliska Ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay jiritaanka, weerarro cirka ah oo shalay ka dhacay duleedka degaanka Camaara ee gobolka Mudug.
CAMAARA, Soomaaliya – Kooxda Al-Shabaab ayaa shalay saacado kooban la wareegtay gacan ku heynta magaalada Camaara ee gobolka Mudug, kadib markii ay weerar xooggan xilli hore kula jarmaadeen saldhig ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Galmudug ku leeyihiin degaanka.
Hayeeshee, weerarkaas ayaa sababay in mar kale, la adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka, kuwaas oo galinkii danbe ee shalay qasaaro xooggan gaarsiiyay Koxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab.
War ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika, (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Taliska Mareykanka ee Afrika oo is kaaashanaya ay qaadeen weerar wadajir ah oo ka dhan ah dagaalyahannada Al-Shabaab ee ka howlgala agagaarka Cammaara, 24-kii Agoosto.
AFRICOM, waxa ay xaqiijiyeen in duqeynta Mudug aysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay, waxayse sheegeen in qiimaynta waxyeellada dagaalka wali la sugayo, si loo bixiyo warbixin rasmi ah.
Tallaabada AFRICOM, ayaa ka dhigan in Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Taliska Mareykanka ee Afrika, ay markii afaraad labo bil gudahood, howlgallo xooggan oo wadajir ah, duqeymo cirka ahna wata ka fuliyaan Mudug, kuwaas oo wax yeello xooggan lagu gaarsiiyay Al-Shabaab.
War ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug, ayaa lagu sheegay, in kadib duqeynta Mareykanka, ay Ciidamada Huwanta ah dul istaageen meydka in ka badan 60 askari oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo galinkii danbe ee Shalay ka baxsaday Camaara kadib soo rogaal celintii ciidanka XDS iyo kuwa Daraawiishta Galmudug.